Ebumnuche 3 kpatara igha ụlọ ọrụ PR | Martech Zone
Monday, September 21, 2009 Wenezdee, Jenụwarị 29, 2014 Chris Lucas kwuru
Na ọrụ m naMpempe akwụkwọ , ihe onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị, otu n'ime ọrụ m bụ itinye mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze (PR) na mkpuchi mgbasa ozi, nke na-eme ka ikpughe ma na-ere ahịa.
Inwe ahụmahụ ma na gị n'ụlọnga na ahịa n'akụkụ m na-aghọta ihe a ezigbo ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze nwere ike ime maka nzukọ. Ndị a bụ ihe atọ, site na ahụmịhe m, ihe kpatara azụmaahịa, ọkachasị obere azụmaahịa, ga-eji were ọrụ ụlọ ọrụ na-abụghị PR.
Don't nweghị oge ime PR: PR abụghị spigot nke ị nwere ike ịgbanwuo ma gbanyụọ. Dị nnọọ ka ọrụ ahịa ndị ọzọ, agbanwe agbanwe, usoro, na PR nwere ike ịlele bụ ihe ọ bụla kwesịrị ịhazi maka ya ma gbuo ya ogologo oge. Dị nnọọ ka ịgaghị agbanye SEO, PR bụ ihe na - emewanye ike ka ị na - etinyekwu mgbalị na ya.
Iji jirichaa a Launch: Imirikiti azụmaahịa na-aghọta etu esi dị mkpa ịmalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ bụ ihe ịga nke ọma nke azụmaahịa gị. PR karịrị naanị ide ederede akụkọ na itinye ya na ọrụ waya. Inwe onye ozo nwere ike ime ka mmekorita mgbasa ozi di elu, mgbasa ozi ndi mmadu, ihe omume, ohere inweta ihe ndi ozo na ihe ndi ozo metụtara ya na isi ihe nwere ike inye gi aka ka igba ahia gi. Mana cheta, dịka m kwuru na isi 1. PR abụghị ihe ịgbanwuo ma gbanyụọ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji tinye ọrụ na mpụga gị ụlọ ọrụ maka mwepụta gị, ị ga-ahụrịrị na ịnwere usoro ebe ị ga - ebido. gaa n'ihu ike na ume ị wuru. Ihe kachasị njọ nke ụlọ ọrụ nwere ike ime bụ ịmalite nnukwu ngwaahịa, nwee nnukwu PR, ma pụọ ​​n'anya na-ebughi oke ihe gị na ụlọ ọrụ gị nọrọla ọtụtụ ọnwa.
Iji weghachite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ: Oge ụfọdụ ọbụna ụlọ ụlọ PR kachasị mma nwere ike ịchụso ezigbo echiche. Dị ka ọ dị na re-brand ma ọ bụ webụsaịtị na-eweta ụlọ ọrụ dị na mpụga iji weghachi PR gị nwere ike ịkwụ ụgwọ buru ibu. Ezigbo ụlọ ọrụ PR mara otu esi ele ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ anya wee hụ ihe ọhụrụ - ihe buzz kwesịrị. Enwere ike iwere ihe i chere na ọ nwụọla ma ọ bụ na ike gwụrụ gị gaa ahịa ọhụrụ ma ọ bụ ụzọ ọhụụ ma jiri ụkwụ mee ngwa ngwa. Iji ụlọ ọrụ PR nke nwere ike ịkpọtụrụ kọntaktị ha ngwa ngwa ma nwalee echiche ọhụrụ nwere ike ịmalite ngwaahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-agwụ ike. Cheta na, ọbụlagodi PR kachasị mma enweghị ike ịtụte ngwaahịa na-anwụ anwụ, gbaa mbọ hụ na enwere ihe ebe ahụ ma gwa ụlọ ọrụ gị eziokwu maka ihe ịga nke ọma na ọdịda gara aga ka ha wee nwee ike ịnye atụmatụ dị mma.
Ma dị ka ego ebe a bụ otu ihe kpatara ị ga-eji ego ụlọ ọrụ na-abụghị ọrụ.
4. Are nọ n’ahịa juru ebe niile: Businessesmụ obere azụmaahịa na-achọ ịsọ mpi na nnukwu, ụlọ ọrụ siri ike, ma ọ bụ ahịa jupụtara na ya nwere ike ịhụ ụfọdụ ezigbo elele site na ịnweta ụlọ ọrụ na mpụga PR. Ezigbo ụlọ ọrụ ga-enwe ike ịmepe atụmatụ na-elekwasị anya na ike nke ụlọ ọrụ gị na ndị iche na - eme ka ị pụta. Oge ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị mkpọtụ ahụ wee ruo ngwa ahịa ịchọrọ ngwa ngwa.
Ndị a abụghị naanị ihe mere otu nzukọ ga-eji were kpọọ ụlọ ọrụ PR mana ndị a bụ ụfọdụ ihe m hụrụ site n'aka onye ahịa na nke ụlọ ọrụ iji kwụọ ụgwọ na mpụga PR.
Tags: gbawaraprmmekọrịta ọhaneze
Sep 22, 2009 na 2: 20 AM
Ndị ụlọ ọrụ PR dị ịtụnanya. Mana ikwesiri ighota PR tupu ịchọọ otu ndị a.
Lelee edemede a: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Lelee vidiyo a mara mma:
Sep 22, 2009 na 12:27 PM
Isi ihe ọma niile. Imirikiti obere ụlọ ọrụ enweghị ego iji mee nke a. Ma dị ka i nwere n'elu,
mgbalị kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe, dị nkenke, ma nwee atụ.
Otú ahụ ka ọ dịkwa maka mgbasa ozi. Ahụrụ m obere azụmaahịa na-eme ya oge ole na ole ma na-eme mkpesa na mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na azụmahịa ahọrọ ime ya n'onwe ha, isi ihe anaghị agbanye spigot ahụ. Dị nnọọ ka ị na-ehicha kapeeti gị kwa ụbọchị, hichaa okporo ụzọ dị n'ihu ụlọ ahịa gị, nke a bụ ihe chọrọ nlebara anya na-aga n'ihu.
Ọkt 28, 2009 na 2:33 AM
N'ezie, ọ bụ ego kacha mma ị nwere ike iji mee ihe iji chụọ ahịa gị. Nwere ike ibiaghachi gburugburu ịgbaso ohere oge niile, mana ị n'ozuzu ha enweghị mmefu ego iji kpuchie ha niile nke ọma. Chọta strenghts gị wee nweta ezigbo ndụmọdụ wee wuo ebe ahụ. Ezigbo isiokwu
Chicago PR Ụlọ ọrụ
Dec 20, 2011 na 12:44 PM
Nwere ụfọdụ isi ihe ebe a - nnukwu post!
Echere m na m ga-ekwenye na Chris niile a. Ihe ọzọ kpatara ya bụ ka a gwa gị, ‘mba’ mgbe ị nwere echiche ọjọọ. Y’oburu n’ichoro ndi oru nnochite anya oru nke PR zuru oke ma o gha enwe ike ikwu mgbe o chere n’echiche n’echiche gi n’aru oru ma ghari inwe obi ike igwa gi.
Echere m na ọ ga-ekwupụta na ha kwesịrị ịmepụta ihe iji wepụta echiche n'onwe ha!
Ọkt 5, 2017 na 2:23 PM
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmụ na ọ bụrụ na azụmaahịa ịchọrọ ịkpọ ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na enwere uru nwere ike ịbịara ha site na iji otu. Ọ masịrị m otu ị siri kwuo na nke a ga - enyere ha aka ime ka mbido azụmahịa ha ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ha chọrọ ire. Nke a bụ ihe ha kwesịrị iburu n’obi ka ha nwee ike nwee ụfọdụ ka ha na ndị ọrụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ n’ụdị niile.